Xukumadda oo isku maan-dhaafsan da’yarta kelinimada ku timid - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boqolaal u soo daawasho tagtay dooddii baarlamaanka oo maanta looga doodayey dhallaanka kelinimada ku yimid. sawir: Claudio Bresciani/TT
Xukumadda oo isku maan-dhaafsan da’yarta kelinimada ku timid
Miljöpartiet: deganaasho ha la siiyo dhallaanka kelinimada ku yimid
La daabacay onsdag 13 september 2017 kl 14.43
Dood maanta baarlamaanka ka yeeshay arrimo la xiriira dhallaanka qooxiga ah ee kelinimada waddanka ku timid ayey ku cadaatay in xukumadda uu ka dhex jiro is-maandhaaf arrintaas ku saaban.
Xisbiga Miljöpartiet ayaa dooonaya in isbddelaad kale lagu sameeyo sharciga si ay ugu suurtagasho dhallaankaan ka helaan deganaansho waddanka.
Laakiin wasiirka socdaalka Heléne Fritzon ayaa iyadu intii doodda socotay diidmo kala hortimid isbaddel sharciga in lagu sameeyo.
Xildhibaan Maria Ferm oo ka tirsan Miljöpartiet ayaa sheegtay in xisbigeeda ku guuleystay in laga reebo carruurta sharciga magangeliyada ee ku meel-gaar ah ee xagaagii sannadkii hore hirgalay. Laakiin ka reebitaankaas uusan noqon mid ilko leh waayo bay tiri dhabo-marka hagga hey’adda socdaalka iyo waqti dheer ee laga sugo jabaaha hey’adda ayaa ka dhigay mid aan waxtar laheyn, goorta carruurtan 18 u buuxsantana looga dhaqmo sida qaan-gaarka.
– Waxa aan qabnaa in dhallaankii yimid sannadkii 2015 la ogalaado waddanka in ay deganaadaan, waayo waa shaqsiyaad sannadyo badan dalka joogay oo haddii xilliga la sugo jawaabaha caadi ahaan lahaa ay heli lahaayeen deganaansha balse ku qasbanaaday waqti dheer jawaabta in ay sugaan, inta ay sugayeena qaan-gaar noqday oo markas la siiyey diidmo.
Ayey ka tiri Maria Ferm dooddii ugu horeysay ee lagu qabtay baarlamaanka oo shaqo billaabay talaadadii. Waxaa laga doodayey dhallaanka dalka ku cusub ee kelinmada ku yimid, dooddaan oo uu dalbaday xisbiga Vänsterpartiet.
Boqolaal qof ayaa halka laga daawado doodaha baarlamaanka oo buux dhaafshay oo la scoday doodda. Inta badan daawadyaasha waxa ay ka socdeen shabakad la yiraahdo Unga i Sverige, oo ah shabkad taageerta dhallaanka iyo carruurta sharci la’aanta ah ee ka soo jeeda Afghanistan.
Xisbiyada Vänstern, Centern iyo Miljöpartiet ayaa intii doodda socotay dalbaday in la qaado tillaabooyin loogu suurto-gelinayo sidii ay dalka deganaansho uga heli lahaayeen dhallaanka kelinimada ku yimid, gaar ahaan kuwa ka yimid dalka Afghanistan.
Halka xisbiyada Socialdemokraterna, Moderaterna iyo Sverigedemokraterna dhankooda difaacayeen xaaladda sida ay maanta tahay. Doodda ay cuskanayeen ayaa u badneynd in ay tahay howl-sha hey’adaha go’aan ka gaaridda kiiska magangeliyo ee shaqsiga oo aysan aheyd mid siyaasiinta u taal.
Halka Liberalerna iyo Krist-demokrterna midkooda dooneynin sharciga mangeliyada hadda sida uu yahay wax in laga baddelo.
Wasiirka socdaalka Heléne Fritzon oo dooddii maanta ka hadlaysay ayaada iyada diiday wax ka baddelitaan in lagu sameeyo sharciga magangeliyada, kana hortimid hindisaha xisbiga xukun wadaaga yahiin ee Miljöpartiet.
Dhanka kale Maria Ferm oo matalaysay MP ayaa iyada sheegtay in arrintan halkaa looga hari doonin oo doodda la horgeyn doono golaha xukumadda.
– Arrintan ma ahan hindise dowladda leedahay balse waa mid u gaar ah xisbiga Miljöpartiet. Muhiim ayey aheyd in la fiiriyo bal in baarlamaanka arrintan ka dhex heli karo aqlibiyad taageero. Balse dooddii kadib weli iima cadda halka ay arrinkan ka taagan yahiin xisbiyada Liberalerna iyo Kristdemokraterna, ayey tiri Maria Ferm oo ah xil-dhibaanad ka tirsan Miljöpartiet.